ESAT Afaan Oromo – Page 74 – ESAT Afaan Oromo
Baqattootni Itoophiyaa biyya keeniyaa tti humnoota tika TPLF iin shoorarkaawaa jiraachuun barame.
Baqattootni rakkoo siyaasaatiif biyya Itoophiyaa irraa baqatanii biyya keeniyaa jiraatan damee tika mootummaa TPLF iin daraa keessa jiraachuun hubatame. Gaazeexaan Okey Afrikaa ja’amu kan keeniyatti qophaahu akka gabaasetti baqattootni lammii Itoophiyaa kan rakkoo siyaasaatiif biyya irraa baqatanii biyya keeniyaa jiraatan qabeenya isaanii saamamuu bira darbanii haala sodaachisaa cimaan akka doorsifamaa jiran gabaaseera. Gaazeexaan kun baqataa Obboo Taarikuu Dabalaa ja’amu ragaadhaaf ...
Guyyaa Arraa magaalaa gudditti biyya Ameerikaa Waashington D.C. tti Oromoonni kutaalee biyya Ameerikaa 28 fii Biyya Kanadaa irraa walitti dhufan marii fii hiriira akka taasisaa jiran ibsame
Qophii tanaaf torbee sadii caalaa qophii cimtuu taasisuun hawaasni Oromoo godinaalee biyya Amerikaa jiraatan marti akka qooda irraa fudhatan tattaafachaa turuuniis barameera. Qophii guyyaa arraa tana milkeeysuuf jecha kaleessa galgala hoteela Metro Point tti walgahuun haala sagantaa guyyaa arraa itti qaceeluun malu irratti marii addeellaan face book gubbatti adunyaa maraaf dabrsaa ti turan. Marii tana irraa hiis sadarkaa adunyaatti namoonni ...
Hidhattoonni Suudan Kibbaa Daangaa biyya Itoophiyaa ciihanii Gambeellaa Seenanii Nama 200 Ol Ajjeesan
Hidhattoonni gosa Murlee, torban darbe keessa, Sudaan Kibbaa irraa gara daangaa Itoophiyaa seenani namoota baayyee ajjeesuu isaanii fi joollee 100 ol fudhatani horii beeyladaa hedduu saamanii gara Sudaan Kibbaa deeb’uu miidiyaaleen gara garaa gadda cimaan gabaasaati jiran. Haaluma kanaan Televisonni fii Radiyoon Isaat goyyaa sadi hiif guyyoota gaddaa labsaniiti jiran. Akkuma himamutti hidhattoonni gosa Murlee jimaata darbe Suudan Kibaatii gara ...
Baqattoonni Dhibbootaan Lakkaawaman Garba Meditraaniyaan Keessatti Dhuman
Baqattoonni biyyoota Gaafa Afrikaa dhibbootaan lakkaawaman, gara Awurooppaatti osoo bahara bishaan Meditraniyaan gubbaan doniin deemaa jiranii galaana Meditiraaniyaan gama Bahaa keessatti dhumuu isaanii barame. Kanneen balaa kana irraa hafanii fi namoonni ijaan arggan akka himanitti dooniin galaanaanni fuudhe tun gara baqattoota dhibba shanii fe’attee akka deemaa turte ibsaniiru. Baqattoonni kuni guyyaa jimaataa Ebla 8 bara 2016 tti magaalaa kaayroorraa gara ...
Kubbaaniyaan Hindii tajaajila humna ibsaa Itoophiyaa fooyyessuuf walii galtee dolaara miliyoona 50 mallatteesse.
Bitootessa 31/2016 Kubbaaniyaan Hindii tajaajila humna ibsaa Itoophiyaa fooyyessuuf walii galtee dolaara miliyoona 50 mallatteesse. Magaalaa Finfinnee dabalatee magaalota naannoowwan ishee keessatti qulqullinaa fi ciccitiinsa ibsaa furmaata dhabee jiru furuuf kubbaaniyaan hindii tokko piroojektii dolaara miliyoona 50 fudhate. Hojii wal fakkaatuuf waggaa tokko dura walii galtee dolaara miliyoona 16.7 mallatteessee kan ture dhaabbatni paawor Giriik konsitiraakishinii rakkoo jiruuf furmaata hin ...
Ministeerri dhimma Biyya alaa Amerikaa gara Itoophiyaa akka deeman ibsame.
Bitootessa 31/2016 Ministeerri dhimma Biyya alaa Amerikaa gara Itoophiyaa akka deeman ibsame. Itti aanaa gargaaraan ministeera dhimma diimokiraasii fi mirga dhala namummaa Ameerikaa Toom Maalinooskiin gareen gaggeeffamu gara Itoophiyaa akka Imalan ministeeri dhimma Biyya alaa Amerikaa beeksiseera. Turtii isaan Itoophiyaatti itti gaafatamaan Ministeera Ameerikaa biyya alaa kun angefamtoota mootummaa waliin wal arguun dhimmoota garaagaraa irratti kan mar’atan yemmuu ta’u, daawwannaan ...
Mormii Oromiyaatti mudateen jiraatootni hedduun dararamaa akka jiran himan.
Bitootessa 31/2016 Mormii Oromiyaatti mudateen jiraatootni hedduun dararamaa akka jiran himan. Mormii master pilaanii magaalaa Finfinneen wal qabatee Oromiyaa keessaatti mormiin uummataa ji’oottan shan lakkoofsise furmaata akka hin argannee fi jiraattotni naannichaas sodaa keessa jiraachuu isaa televizyiinin biyya France gabaasera. Jiraattotni magaalaa Gincii fi naannoo ishee dhaabbata Televizyiinii kana waliin gaaffii fi deebii taassisan akka ibsanitti, hanga ammaatti jiraattonni hidhamaa ...
Oromiyaatti jiraattootni kumaatamaan lakkaa’man hidhamaa jiraachuun himame.
Bitootessa 31/2016 Oromiyaatti jiraattootni kumaatamaan lakkaa’man hidhamaa jiraachuun himame. Mormii Oromiyaatti gaggeefamaa jiruun wal qabatee dhihoo kana dabalataan namootni kuma sadii ol magaalota garaagaraa keessaa hidhamuu isaanii kongirasiin federaalistii oromoo beeksise. Torbee darbe akka biyya keessaa hin baane kan dhorkamanii fi dura ta’aa kongirasii kan ta’an Dr. Mararaa Guddinaa hoggantootni mootummaa ajjeechaa fi hunkuramiinsa uumameef yeroo dhihoo dhiifama gaafatus hidhaan ...
ESAT Canada Afaan Oromo Radio Sat March 12 2016
Abbootii seeraa mana murtii olaanoo federaala sadii Parlaamaan gaggeese
Seera mootummaatiif amanamoo miti kan jedhaman abbootii seera mana murtii olaanoo federaalaa sadii angoon isaanii paarlaaman irraa ka’e. Sirreeffama seera mootummaa, walqixxummaan sab-lammoota hin kabajamne gaaffii jedhuu fi waan biraan kan himataman abbaa seeraa tokko dabalatee abbootiin seeraa sadii parlaamaan hojiirraa isaan hari’e. Abbootiin seeraa hojii isaanii irraa mana mareetiin akka ka’an taasifaman Obboo Gizaachoo Mitikuu, Obboo Habtaamuu Milkii fi ...